भरत भुर्तेल - विकिपिडिया
भरत भुर्तेल पत्रकार तथा व्यङ्ग्यकार थिए । उनको जन्म सन् १९५७ अप्रिल १८मा भएको थियो । उनका पिताको नाम गोविन्द भुर्तेल हो । उनले सन् २०१० अप्रिलमा काठमाडौंको गौशालास्थित पशुपति होटलमा आत्महत्या गरे । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको जीवनी लेख्न शान्त वातावरणको माग गरेपछि उनलाई त्यहाँ राखिएको थियो ।
अर्थशास्त्रमा एमए भुर्तेल भद्रपुर १५ झापाका स्थायी वासिन्दा हुन् । उनी भक्तपुरको कौशलटारमा बस्थे र निधनअघि त्यहाँको घर बेचेर ललितपुरको टिकाथलीमा घर बनाउने योजनामा थिए । उनको परिवारमा तीन छोरी र एक श्रीमती छन् ।
उनले झापाबाट निस्कने विवेचना साप्ताहिक बाट पत्रकारिता सुरु गरेका थिए । उक्त साप्ताहिकमा उनी कार्यालय प्रतिनिधि भई २०३४-०३६ काम गरेका थिए । झापाकै साप्ताहिक विचारमा सहायक सम्पादक (२०३६-०४५) र आलोक साप्ताहिकको सम्पादक (०४५-४७)मा काम गरे । जनआन्दोलन १ सफल भएपछि उनी काठमाडौं आए । २०४७ सालबाट दुइ वर्ष उनी रेडियो नेपालको परिक्रमा कार्यक्रमका सञ्चालक थिए । काठमाडौंबाट निस्कने सुरुचि साप्ताहिकमा ०५१-५६मा समाचार संयोजक र ०५७-०६१मा अर्थ संसार रेडियो कार्यक्रममा संयोजक रहे ।
उनले २०६४ सालको लघु वित्त र नेपालका ग्रामीण गरीबहरूका लागि वित्तीय पहुँच नामक पुस्तक लेखिका डा. रमा बस्याल र गरीबी विरुद्धको आन्दोलन का लेखक भुर्तेललाई सामना बैकिङ पुरस्कार २०६४ प्रदान गरिएको थियो । उक्त पुरस्कारको कुल राशी ५० हजार थियो ।
पछिल्लो अवधि पत्रकारितामा केही निष्क्रिय रहेका भुर्तेल २०६४ सालबाट कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको नेपाल साप्ताहिकमा चरित चर्चा स्तम्भ लेख्न थालेर पुनः चर्चामा आएका थिए । उनी करिब एक वर्ष नेपालको सल्लाहकार सम्पादक पनि रहे । त्यसपछि उक्त स्तम्भसहित उनी नागरिक दैनिक पुगेका थिए । उनको शव फेला पार्दा पनि उक्त स्तम्भका लागि एक रचना भेटिएको थियो ।
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=भरत_भुर्तेल&oldid=338231" बाट अनुप्रेषित
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १४:०९, ९ मे २०१३ मा परिवर्तन गरिएको थियो।